को assembling मा मन्त्री कक्ष एउटा सानो अपार्टमेन्ट
तपाईंको आफ्नै घर लागि फर्नीचर को विकल्प - चाखलाग्दा र रोमाञ्चक काम। सबैले भित्री मा, दुवै लुगा र जुत्ता मा पनि, यसको आफ्नै फैशन छ थाह छ। जो मोडेल चयन गर्न र अप त्यहाँ मन्त्री कक्ष को विधानसभा र स्थापना कुनै पनि पासो नदेखाउनुहोस्?
सबै मंत्रिमंडलों कूप दुई डिजाइन संस्करण उपलब्ध छन्:
1 निर्मित - कुनै पक्ष छ वा पछाडि पर्खाल एक पर्खाल recess वा कोठा को एक कुना मा निर्माण गरिन्छ। तपाईं जमीन मा यो कैबिनेट फिट शरीर स्थापना गर्दा, अपरिहार्य छ किनभने कोठा को घटता पर्खालहरु विवरण trimming आवश्यक हुनेछ।
2. पतवार - सही आयाम र केवल स्लाइड ढोका द्वारा सामान्य फर्नीचर फरक छ। यी मंत्रिमंडलों स्थापना गर्न सजिलो र 2-3 घण्टा जाँदैछन्।
डिजाइन को लागि, यो सरल कोणीय सतहहरु टाढा सार्न आज सुशील छ, अधिक बेशकीमती फर्नीचर आकारहरू राउण्ड। यसको चिकना रेखाहरू यस्तो फर्नीचर धन्यवाद यो दस्तक चलाउन मन जो बच्चाहरु को लागि सुरक्षित हुन्छ, कुना र अनुमानहरु बाहिर चिकना। अर्धव्यास यस मामला - - कैबिनेट खण्ड सबैभन्दा सुशील संस्करण concave वा राउन्ड, बाङ्गो गर्न सकिन्छ।
राम्रो स्लाइड दराज कहिलेकाहीं सम्पूर्ण लाउने कोठा प्रतिस्थापन। आफ्नो भित्री भर्ने - सुविधाको र शान बुझ्न जो मान्छे को लागि एक वास्तविक Godsend। यो र हैंगर, दराज, हुक, दराज, र फ्लोरोसेन्ट प्रकाश संग पट्टी, सम्बन्धहरु लागि रैक को धेरै प्रकार, फलाम, सहायक भण्डारणको लागि खडा।
यस्तो मोडेल को विधानसभा लागि जाँदा - मनमा राख्न उत्पादन को उत्पादकहरु को ग्यारेन्टी द्वारा कवर कि यो सम्मेलन साथ सँगै अर्धव्यास मन्त्री किन्न सिफारिस गरिएको छ केवल कम्पनी को विशेषज्ञहरु को विधानसभा, त्यसैले भने। को बाङ्गो, स्लाइड दराज गर्न विपरीत मा शास्त्रीय मोडेल यसलाई स्वतन्त्र सम्भव छ सङ्कलन।
कसरी एउटा सानो स्टुडियो अपार्टमेन्ट मा कैबिनेट खण्ड को विधानसभा छ - म अनुभव साझेदारी गर्न चाहन्छु।
मुख्य हालत: तपाईं ढोका को स्थापनाका लागि प्रक्रिया पालना यदि विधानसभा मन्त्री कक्ष, छिटो र बदलाव बिना पारित गर्नेछ (कैबिनेट को शरीर पहिले नै भेला भएपछि)।
के अनुक्रम मा ढोका स्थापना गर्न?
1 पहिलो, आवरण कैबिनेट रोलर्स, दराज मन्त्री पक्ष को सामने संग फ्लश लागि माथिल्लो ढोका रेल गर्न स्क्रूड छ।
2. मन्त्री को तल screwing बिना कम रेल राखिएको छ।
3. ढोका शीर्ष रेल मा पहिलो सम्मिलित छ, तपाईं एक सानो झुकाव ढोका आवश्यक हुनेछ। त्यसपछि, तल मा, एकै समयमा, तपाईँ पहिला आफ्नो औंला पाङ्ग्रा ढोका तल किनारा मा पुल पर्छ। पाङ्ग्रा सजिलै एक वसन्त मा माउन्ट।
4 ठाडो ढोका लागि प्रयास - यदि तपाईं मन्त्री छेउमा देखो, यो ठाडो समतल हुनुपर्छ। राख्न, समायोजन ठाउँबाट स्थापना, रोलिंग ढोका जाँच किनाराको साथ तल रेल कस्नु, फेरि र रेल कस्नु आवश्यक भएमा पूर्ण। माउन्ट प्वालहरू उपलब्ध छैन भने, तपाईंले नयाँ, पेन्सिल ठाउँ स्थिति कम रेल मा उल्लेख गर्न सकिन्छ रूपमा, nasverlit सक्नुहुन्छ ढोका हटाउन, रेल सुरक्षित, ठाँउ मा फिर्ता ढोका राखे।
5 दोस्रो ढोका स्थापना र ढोका को स्थिति समायोजन गर्नुहोस्।
भनेर पर्खाल गर्न मन्त्री सार्न जब तल्ला सोचो छैन - कैबिनेट, तपाईं को छत वा laminate छ भने assembling यस्तो महसुस रूपमा ग्लाइडिङ, केही नरम सामाग्री को दराज मुनि अघि।
निस्सन्देह, किनभने मन्त्री फ्रेम को भुइँमा ठाउँ खाली कमी को सानो अपार्टमेन्ट मा स्थितिमा संकलन गर्न।
के अनुक्रम मा एक गणनामा स्थिति मन्त्री कक्ष विधानसभा हुन्छ?
• पहिलो sidewalls एंकरिंग। प्राथमिक सहायक समर्थन। दराज संकलन गर्न र एक व्यक्ति सक्षम हुनेछ, तर सँगै यो धेरै छिटो हुनेछ।
• छत सुरक्षित।
• अर्को - को पछिल्लो पर्खाल, fiberboard को व्यक्तिगत पानाहरू हुन्छन् जो। दायाँ र बायाँ पाना कस्नु। दराज आयताकार बारी गर्नुपर्छ। को समतल सबै कुनामा, एक कुनामा तखता स्थानापन्न द्वारा जाँच मन्त्री squareness सीधा छन्।
• त्यसपछि स्थापित विभाजन र अन्तमा निश्चित पछिल्लो पर्खाल। कुनामा तिनीहरूले supine स्थिति अझै पनि हुँदा अग्रिम मा पोस्ट र विभाजन गर्न कस्नु गर्न आवश्यक छ।
• क्याबिनेट पर्खाल उत्प्रेरित गर्छ र, प्राथमिकताको, उनको क्षेत्रमा संलग्न। को रियर पर्खाल गर्न मन्त्री भने, यो पर्खाल यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ।
• अन्तिम चरण - स्थापना ढोका र आन्तरिक भर्ने। समतल एक हात मा चिह्नित गर्दै छन्, तखता स्तर मा दोस्रो निश्चित सेटिङ (को समतल को कुनामा पूर्व-fastened हुनु पर्छ)।
कैबिनेट विशेष समायोज्य खुट्टा छ भने, त्यसपछि उसलाई एउटा स्तर मा सेट गरिएको छ जो एक पोडियम, हुन पोको, र त्यसपछि यो रैक, समतल र अरू सबै कुरा माउन्ट।
तपाईं सबै कुरा छोड्न सक्नुहुन्न भने यो तल्ला बीच आफ्नो घर छ र पर्खालहरु त्यसपछि एउटा सानो खाली संग, सही कोण छैनन् रूपमा। भने, तर, एक ठूलो फरक, यो आवश्यक (मरम्मत को लागि) पर्खाल सीधा छ। को पङ्क्तिबद्ध एक छरितो संस्करण - पोडियम चाहेको कोण मा घास काटन।
Lamella - यो के हो? तिनीहरूले के लागि हो?
"रात बहिनीहरु": अभिनेता र चलचित्र सुविधाहरू
आफ्नो वार्षिकोत्सव मा सुन्दर महिला बधाई - originality हुन
को Serendipity होटल बीच (Unawatuna, श्रीलंका): विवरण, सेवा,
होटल बार्सिलोना होटल3* (Nha Trang, भियतनाम) फोटो र समीक्षा
Peloponnesian प्रायद्वीप र यसको आकर्षण
गर्भावस्था मा Antispasmodics: सङ्केत गर्छ र contraindications
स्वास्थ्य टूमलाइन कंगन: उपभोक्ता समीक्षा